iPhone XS Max ထက် ဘာလို့ XS ကို ဝယ်သင့်တာလဲ?
8 Oct 2018 . 2:20 PM
အခုချိန် Legendary စမတ်ဖုန်းတန်းမှာ အသစ်ဆိုလို့ iPhone XS Max ရယ် XS ရယ် Galaxy Note9ဖုန်းတွေပဲ ရှိတာပါ။ မကြာခင်ထွက်လာတော့မယ် iPhone XR ကလည်း သူ့ Legend နဲ့သူ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ အောက် စမတ်ဖုန်းတန်းမှာ ပွဲစည်အောင် လုပ်ဦးမယ်ဆိုတော့ Galaxy Note9ကိုခဏဖယ်ထားပြီး Apple Flagship ဖုန်း ၂ လုံး XS Max နဲ့ XS မှာ ဘာလို့ iPhone XS ကို ရွေးချယ်တာ ပိုသင့်တော်သလဲဆိုတာ ဖော်ပြသွားပါ့မယ်။
XS Max Vs. XS
iPhone ကိုင်မယ့်လူအတွက် ဘယ်လောက်ဈေးကြီးတယ် ပဓာနမကျပေမယ့် Comparison လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် XS ကို ရွေးချယ်တာ ပိုကောင်းတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ 64GB မော်ဒယ်ကို ဒေါ်လာ ၉၉၉ နဲ့ရောင်းချနေတာမလို့ ၁၀၉၉ နဲ့ရောင်းချနေတဲ့ XS Max ထက် ဒေါ်လာ ၁၀၀ လောက်သက်သာနေတယ်။ Data များများသိမ်းဖို့လိုတယ်ဆိုရင် 256GB ၊ 512GB မော်ဒယ်ဝယ်တာထက် iCloud Storage ကို တစ်လ ၀.၉၉ ဒေါ်လာဝယ်သုံးပြီး 50GB ရနိုင်မယ်။
ဒီလို ဒေါ်လာ ၁၀၀ ချွေတာထားလိုက်တာက iPhone အတွက်လိုအပ်တဲ့ Accessories တွေဝယ်လို့ရသွားသလို သေးသေးသွယ်သွယ် ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်ဖြစ်နေမယ့် XS က ပိုသင့်တော်မယ်ထင်ပါတယ်။
Display Quality ချင်းအတူတူပဲဆိုတော့ XS ကိုင်ရပိုအစဉ်ပြေတယ်
OLED Panel သုံးတာချင်း အတူတူဆိုတော့ Contrast ၊ Colour Accuracy စတဲ့ Display အရည်သွေးအားလုံး အတူတူပါပဲ။ ဒါထက် XS Screen ပိုသေးသွားတဲ့အတွက် Max ထက် Pixel Density အတူတူဆိုရင်တောင် PPI ပိုမြင့်တယ်။
OLED Display on iPhone XS Max & XS
ဒီလို 0.6” လောက် Screen ပိုသေးသွားတဲ့အချက်က XS ကိုင်ရ ပိုကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်ရှိသလို ဘောင်းဘီအိတ်ထဲ ထည့်ရပြုရတဲ့အခါမျိုးဆို ဖုန်းထိခိုက်မိမှာ စိတ်မပူရပါဘူး။
XS က ပိုပေါ့ပါးတယ်
ဖုန်းတစ်လုံးကိုင်ရတာ သေးသေးသွယ်သွယ်ဖြစ်တယ်၊ Weight မလေးဘူးဆိုရင် Screen Size ကြီးနေပါစေ လူတကာ သဘောကျတဲ့အချက်ဖြစ်တာမလို့ 177g အလေးချိန်ပဲရှိတဲ့ XS က 208g လေးတဲ့ Max ထက် Portable ပိုဆန် ၊ ကိုင်ရပိုကောင်းတယ်။
Smaller in size means less weight
Performance လည်း အတူတူပဲ
အရင်က ပိုကြီးတဲ့ဖုန်းဆိုရင် Performance ပိုကောင်းတယ် ပြောရပေမယ့် XS Max နဲ့ XS တို့ကျ Sibling အမွှာ ညီအစ်ကိုတွေလို့ ပြောရင် ပိုသဘာဝကျပါတယ်။ A12 Bionic Chip ပဲ သုံးထားလို့ ဖုန်း ၂ မျိုးလုံး စွမ်းဆောင်ရည် အတူတူပဲပြောရသလို Price Tag အရ ဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုရင် XS က သင့်တော်တဲ့ ရွေးချယ်မှုပါ။
The most powerful A12 Bionic Chip
Back Camera လုပ်ဆောင်ချက်ခြင်းလည်း အတူတူပဲ
XS Max နဲ့ ကျောဘက် Dual Camera ချင်းအတူတူပဲဆိုတော့ DxOMark ပေးတဲ့ ရမှတ်ချင်းလည်း အတူတူပါ။ f/1.8 ရှိတဲ့ 12MP Main ကင်မရာကို f/2.4 ရှိတဲ့ Telephoto 12MP ကင်မရာနဲ့ တွဲပေးထားတာဆိုတော့ Zoom ၁၀ ဆချဲ့ဆွဲ ရိုက်ကူးနိုင်သလို DxOMark 105 မှတ်ရှိတာမလို့ သေးသေးလေးနဲ့ အဆိပ်ပြင်းတဲ့ XS က ရွေးချယ်စရာပါ။
Back Dual Camera
Front Camera လည်း အတူတူပဲ
iPhone7ကတည်းက သုံးလာတဲ့ 7MP ရှေ့ကင်မရာလေးက f/2.2 ရှိသလို Retina Flash ၊ Smart HDR နည်းပညာနဲ့ Portrait Mode ထဲမှာ Bokeh နဲ့ Depth Control ပါဝင်လာလို့ Selfie ဆွဲတဲ့နေရာမှာလည်း XS Max နဲ့ တန်းတူရှိနေသလို ပြိုင်ဖက်တွေထက်လည်း ပိုအားသာနေတယ်။
The same front camera
IP68 နဲ့ ရေစို၊ ဖုန်ဝင်မှာ မပူရဘူး
XS Max လိုပဲ IP68 Rating ရှိတာမလို့ XS ဝယ်ထားရင် ရေစိုတာ၊ ဖုန်ဝင်မှာ ထွေထွေထူးထူး စိတ်ပူနေစရာမလိုပါဘူး။
iPhone XS also has iP68 Standard
eSIM နည်းပညာနဲ့ Dual Sim သုံးနိုင်သေးတယ်
စက်တင်ဘာ Event မှာ မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ eSIM နည်းပညာကို iPhone မော်ဒယ်အသစ်မှာ သုံးလာခဲ့ပြီမလို့ XS Max ပဲကိုင်ကိုင် XS ပဲကိုင်ကိုင် ဒီအားသာချက်တွေ ပိုင်ဆိုင်နေဦးမှာပါ။
Also supports eSIM
ဒါကြောင့်မလို့ နည်းပညာအားသာချက်လည်းတူ သေးသေးကျစ်ကျစ်လည်းဖြစ် ဈေးလည်းပိုသက်သာတဲ့ iPhone XS က ခုခေတ်စိန်ခေါ်မှုတွေအရ ရွေးချယ်သင့်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးပါ။
iPhone XS Max ထကျ ဘာလို့ XS ကို ဝယျသငျ့တာလဲ?
အခုခြိနျ Legendary စမတျဖုနျးတနျးမှာ အသဈဆိုလို့ iPhone XS Max ရယျ XS ရယျ Galaxy Note9ဖုနျးတှပေဲ ရှိတာပါ။ မကွာခငျထှကျလာတော့မယျ iPhone XR ကလညျး သူ့ Legend နဲ့သူ ဒျေါလာ ၁၀၀၀ အောကျ စမတျဖုနျးတနျးမှာ ပှဲစညျအောငျ လုပျဦးမယျဆိုတော့ Galaxy Note9ကိုခဏဖယျထားပွီး Apple Flagship ဖုနျး ၂ လုံး XS Max နဲ့ XS မှာ ဘာလို့ iPhone XS ကို ရှေးခယျြတာ ပိုသငျ့တျောသလဲဆိုတာ ဖျောပွသှားပါ့မယျ။
iPhone ကိုငျမယျ့လူအတှကျ ဘယျလောကျဈေးကွီးတယျ ပဓာနမကပြမေယျ့ Comparison လုပျကွညျ့မယျဆိုရငျ XS ကို ရှေးခယျြတာ ပိုကောငျးတယျလို့ ပွောနိုငျပါတယျ။ 64GB မျောဒယျကို ဒျေါလာ ၉၉၉ နဲ့ရောငျးခနြတောမလို့ ၁၀၉၉ နဲ့ရောငျးခနြတေဲ့ XS Max ထကျ ဒျေါလာ ၁၀၀ လောကျသကျသာနတေယျ။ Data မြားမြားသိမျးဖို့လိုတယျဆိုရငျ 256GB ၊ 512GB မျောဒယျဝယျတာထကျ iCloud Storage ကို တဈလ ဝ.၉၉ ဒျေါလာဝယျသုံးပွီး 50GB ရနိုငျမယျ။
ဒီလို ဒျေါလာ ၁၀၀ ခြှတောထားလိုကျတာက iPhone အတှကျလိုအပျတဲ့ Accessories တှဝေယျလို့ရသှားသလို သေးသေးသှယျသှယျ ကဈြကဈြလဈြလဈြဖွဈနမေယျ့ XS က ပိုသငျ့တျောမယျထငျပါတယျ။
Display Quality ခငျြးအတူတူပဲဆိုတော့ XS ကိုငျရပိုအစဉျပွတေယျ
OLED Panel သုံးတာခငျြး အတူတူဆိုတော့ Contrast ၊ Colour Accuracy စတဲ့ Display အရညျသှေးအားလုံး အတူတူပါပဲ။ ဒါထကျ XS Screen ပိုသေးသှားတဲ့အတှကျ Max ထကျ Pixel Density အတူတူဆိုရငျတောငျ PPI ပိုမွငျ့တယျ။
ဒီလို 0.6” လောကျ Screen ပိုသေးသှားတဲ့အခကျြက XS ကိုငျရ ပိုကဈြကဈြလဈြလဈြရှိသလို ဘောငျးဘီအိတျထဲ ထညျ့ရပွုရတဲ့အခါမြိုးဆို ဖုနျးထိခိုကျမိမှာ စိတျမပူရပါဘူး။
XS က ပိုပေါ့ပါးတယျ
ဖုနျးတဈလုံးကိုငျရတာ သေးသေးသှယျသှယျဖွဈတယျ၊ Weight မလေးဘူးဆိုရငျ Screen Size ကွီးနပေါစေ လူတကာ သဘောကတြဲ့အခကျြဖွဈတာမလို့ 177g အလေးခြိနျပဲရှိတဲ့ XS က 208g လေးတဲ့ Max ထကျ Portable ပိုဆနျ ၊ ကိုငျရပိုကောငျးတယျ။
Performance လညျး အတူတူပဲ
အရငျက ပိုကွီးတဲ့ဖုနျးဆိုရငျ Performance ပိုကောငျးတယျ ပွောရပမေယျ့ XS Max နဲ့ XS တို့ကြ Sibling အမှာ ညီအဈကိုတှလေို့ ပွောရငျ ပိုသဘာဝကပြါတယျ။ A12 Bionic Chip ပဲ သုံးထားလို့ ဖုနျး ၂ မြိုးလုံး စှမျးဆောငျရညျ အတူတူပဲပွောရသလို Price Tag အရ ဆုံးဖွတျရမယျဆိုရငျ XS က သငျ့တျောတဲ့ ရှေးခယျြမှုပါ။
Back Camera လုပျဆောငျခကျြခွငျးလညျး အတူတူပဲ
XS Max နဲ့ ကြောဘကျ Dual Camera ခငျြးအတူတူပဲဆိုတော့ DxOMark ပေးတဲ့ ရမှတျခငျြးလညျး အတူတူပါ။ f/1.8 ရှိတဲ့ 12MP Main ကငျမရာကို f/2.4 ရှိတဲ့ Telephoto 12MP ကငျမရာနဲ့ တှဲပေးထားတာဆိုတော့ Zoom ၁၀ ဆခြဲ့ဆှဲ ရိုကျကူးနိုငျသလို DxOMark 105 မှတျရှိတာမလို့ သေးသေးလေးနဲ့ အဆိပျပွငျးတဲ့ XS က ရှေးခယျြစရာပါ။
Front Camera လညျး အတူတူပဲ
iPhone7ကတညျးက သုံးလာတဲ့ 7MP ရှကေ့ငျမရာလေးက f/2.2 ရှိသလို Retina Flash ၊ Smart HDR နညျးပညာနဲ့ Portrait Mode ထဲမှာ Bokeh နဲ့ Depth Control ပါဝငျလာလို့ Selfie ဆှဲတဲ့နရောမှာလညျး XS Max နဲ့ တနျးတူရှိနသေလို ပွိုငျဖကျတှထေကျလညျး ပိုအားသာနတေယျ။
IP68 နဲ့ ရစေို၊ ဖုနျဝငျမှာ မပူရဘူး
XS Max လိုပဲ IP68 Rating ရှိတာမလို့ XS ဝယျထားရငျ ရစေိုတာ၊ ဖုနျဝငျမှာ ထှထှေထေူးထူး စိတျပူနစေရာမလိုပါဘူး။
eSIM နညျးပညာနဲ့ Dual Sim သုံးနိုငျသေးတယျ
စကျတငျဘာ Event မှာ မိတျဆကျလိုကျတဲ့ eSIM နညျးပညာကို iPhone မျောဒယျအသဈမှာ သုံးလာခဲ့ပွီမလို့ XS Max ပဲကိုငျကိုငျ XS ပဲကိုငျကိုငျ ဒီအားသာခကျြတှေ ပိုငျဆိုငျနဦေးမှာပါ။
ဒါကွောငျ့မလို့ နညျးပညာအားသာခကျြလညျးတူ သေးသေးကဈြကဈြလညျးဖွဈ ဈေးလညျးပိုသကျသာတဲ့ iPhone XS က ခုခတျေစိနျချေါမှုတှအေရ ရှေးခယျြသငျ့တဲ့ စမတျဖုနျးတဈလုံးပါ။